Angola: Lafo ny fiainana any Luanda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2009 6:08 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Deutsch, Nederlands, Swahili, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Lafo avokoa ny zavatra rehetra ao Luanda, renivohitry Angola; na ho an'ny angoley izany na ho an'ny vahiny, ireo mponina any dia mahafantatra izany tsara. Ny fototra toy ny sakafo sy ny fianarana ary ny trano fonenana dia mitovy vidy amin'ny any amin'ny firenena eoropeana. Ny mahasamy hafa azy dia ny karama mbola latsaka ambany dia ambany any Angola raha ampitahaina amin'ny an-dry zareo any Eropa, izay miady mafy tokoa vao mahita sakafo isan'andro.
Mazava ho azy fa tsy mahakasika ireo mpanambola izany ady izany, izay na amin'ny fomba madio na tsia dia voaaro satria manana vola any amin'ny banky izay mahatonga fialonana ho an'ny tsy manana. Araka ny fanadihadihana nataon'ny orinasa britanika iray, ECA International tamin'ny volana jona 2009 dia i Luanda no tanàna lafo vidy indrindra manerana ny tany atsy ho atsy.
Ao amin'ny bilaoginy Mundo da Verdade [pt], dia manoratra i Miguel Caxias :
“Hahazoanao azy sary an-tsaina fotsiny, ny hofan'ny trano fandriam-bahiny mandritra ny alina iray (efitra an'olon-tokana misy trano fidiovana, miaraka amin'ny sakafo maraina) tao amin'ny trano fandriam-bahiny natoriako no 170 dôlara (110 euros). Trano fandriam-bahiny eo ho eo amin'ny kintana 2 eo. Eropeana iray, tsy noho ny sakafo efa mahazatra azy ihany, fa noho ny antony fandriam-pahalemana koa dia tsy hihinana velively eny rehetra eny. Ny vidin'ny sakafo antonontonony dia 30 dôlara (20 euros) any amin'ny trano fisakafoanana nandehananay (ary raha miaraka amin'ny zava-pisotro sy tsindrin-tsakfo dia tafakatra hatramin'ny 40 na 45 dôlara (30 euros) isan'olona izany.
Miatrika fanarenana ankapobeny i Luanda. Any akaikin'i Marginal (toerana amoron-tsiraka) dia ahitana trano hatramin'ny 1 tapitrisa dôlara (650 000 euros). Efa lafo daholo ireo trano ireo!!!”
Tsy dia mifanentana loatra ny vidim-piainana lafo sy ny farim-piainan'ny mponina satria tsy hita taratra ny fiakaran'ny farim-piainana, na dia ho an'ireo sahirana ara-pivelomana aza. Tsara ny vokatra azon'i Angola raha jerena ny fanondroana ara-pivoarana, kanefa mampalahelo fa tsy tonga any amin'ny mponina akory izany, tsy hita any amin'ny vola miditra amin'ny tsirairay. Fitadiavana miaraka amin'ny tolotra tsy ampy dia vao maika mampananosarotra ny raharaha.
Ny mpanoratra breziliana ao amin'ny bilaogy Diário de África [pt] no milaza ny zava-misy any Angola.
“Tsy ny hofan-trano ihany no lafo. Lafo daholo ny zavatra rehetra. 20 dôlara (13 euros) ny voatabia 1 kilao. Mahatratra 30 dôlara (20 euros) ny voaloboka 1 vilia. Mora lafo ny hena endasina miaraka amin'ny ovy amin'ny vidiny 50 dôlara (30 euros). Mahatratra hatramin'ny 1000 dôlara (650 euros) ny fantso-drano iray. 200 dôlara (130 euros) ny manisy lavaka kely amin'ny fantsona mitondra rivotra amin'ny fiarakodia sy mameno gaz (etona na setroka) hiatrehana ny hafanana any Luanda.
Mila mpikirakira herinaratra ve ianao? Tsy mivoaka ny trano izy raha tsy karamaina 100 dôlara (65 euros). Na dia hoe hanolo takamoa fotsiny aza. Fa nahoana no lafo be toy izany ny zavatra rehetra?”
Araka ny nambaran'ity mpitoraka bilaogy ity ihany dia tsotra fotsiny yn valiny, vokatry ny ady namotika ny fampandrosoana tanatin'ny 30 taona.
“Ny fitadiavana ny fahaleovan-tena nampian'ny ady no namotika ny zavatra rehetra. Ny fahaleovan-tena aloha. Tamin'ny 1975 dia 300 000 ny portugais nandao an'i Angola. Mpitsabo, mpitsabo nify, mpisolo vava, mpanao asa vaventy, mpanolo fantsona, mécaniciens, mpiasam-panjakana, mpampianatra. Tao aantin'ny volana vitsivitsy dia tsy nisy tompon’ andraikitra intsony tany Angola. Tsy nisy olona nahay nitantana ny volan'ny firenena intsony. Avy eo indray ny ady. Notrohan'ny ady daholo ny vola tokony ho nampiasaina tamin'ny fahasalamana, na fampianarana, sy ny foto-drafitr'asa vaventy tany an-toerana. Ampitomboy 30 taona izany rehetra izany. Ny vokany no atao hoe Luanda.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny vidin-tsolika tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia niakatra koa ny saran-dalana ary na dia tsy hita mivantana aza dia niakatra koa ny vidin-javatra. Efa tonga hatramin'ny hoe na dia ny vokatra vokarina any Angola aza efa lafo vidy noho ny nafarana avy any ivelany. Satria nahoana? Aoka hotsarain'ny manam-pahaizana ara-ekonomika aho, fa ataoko fa misy fiantraikany ny lalànan'ny tolotra sy ny tinady. Izay mila zavatra haingana dia tsy maintsy mandoa vola lafo.”
Tsy manana orinasa ny firenena. Afarana daholo ny zavatra rehetra. Tsy misy toerana any any amin'ny fiantsonan'ny sambo. Miandry 2 na 3 volana eny an-dranomasina ny sambo iray vao mahazo fahazoan-dalana hampidina entana. Amin'izao fotoana izao vao manomboka mandeha tsikelikely ny fambolena. Kanefa izany dia any amin'ireo faritra tsy misy vanja milevina ihany. Raha araka ny tarehimarika azoko farany dia fantatra fa ny antsasany mahery amin'ny tany azo ambolena no rakotry ny vanja milevina, tsy misy azo atao. Vokatr'izany, na dia ny sakafo hohanina aza dia hafarana avokoa”.
mitentina 600 KZ ($7 USD) ny henan'osy. Tweetpic an'i @bethinagava